ကိုယျက ပေးဆပျပွီး ခဈြနပေမေဲ့ သူ့ဘကျက လမျးခှဲသှားတဲ့ အကွောငျးအရငျး ၃ခကျြ
ကိုယျ့ဘကျက အကောငျးဆုံးပေးဆပျပွီး ခဈြခဲ့ပမေဲ့ တဈခါတလမှော ကိုယျ့ကို ထားပွီးလမျးခှဲသှားတတျကွပါတယျ။ နှဈဦးသားကွားထဲမှာ ခိုငျခိုငျမာမာ ခပြွလို့ရတဲ့ ပွဿနာကွီးကွီးမားမားလဲ မရှိဘဲ ဘာကွောငျ့ လမျးခှဲသှားရတာလဲ?
ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ရှရေို့းအစဉျအလာအရ အိမျထောငျကတြဲ့အခါမှာ ယောကျြားလေးတှကေ ဦးစီးဦးဆောငျပွုရတဲ့ အိမျထောငျဦးစီဆိုတဲ့ နရောကို သတျမှတျပေးထားကွပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အခုခတျေနှောငျးပိုငျးမှာတော့ အမြိုးသားတငျမက အမြိုးသမီးတှကေလညျး ယောကျြားလေးတှနေဲ့အပွိုငျ ရငျဘောငျတနျးပွီး ဘဝကို ကွုံသလိုဖွရှေငျးနကွေရပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဒီအပွုအမူဟာ ကိုယျတှခေဈြသူနှဈဦးကွားမှာရှိတဲ့ ဆကျဆံရေးကို ပကျြပွားစပေါတယျ။ ယောကျြားလေးတှေ အမြားစုဟာ တဈခြိနျမှာ ကိုယျက ဦးစီးဦးဆောငျပွုရမဲ့ အိမျထောငျဦးစီး ဖွဈလာမယျလို့ ခံယူထားတဲ့အတှကျ ကိုယျခဈြသူကိုလညျး ကိုယျ့ရဲ့ ဦးဆောငျမှုနောကျက လိုကျစခေငျြပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အမြိုးသမီးတှအေနနေဲ့ ကိုယျ့ခဈြသူကို အရမျးခဈြမိတဲ့အခါ သူ့အတှကျ ဘာမှလိုလစေိတျမရှိ ရှကေ့နဦေးဆောငျပွီး ဖွညျ့ဆညျးပေးတာမြိုး ဒါမှမဟုတျ အစစအရာရာ ကိုယျကပဲ ဦးဆောငျပေးခွငျးတာမြိုးရှိလာတဲ့အခါ အမြိုးသားတှအေမွငျမှာ ကိုယျ့အပျေါ လေးစားမှုမရှိဘူး၊ အရာရာသူ့လကျ သူခွခေညျြးပဲ မိနျးကလေး ဦးဆောငျမှုနောကျက လိုကျနရေတယျဆိုတဲ့ အတှေးစိတျက ဝငျလာပွီး ကိုယျ့အနားက ထှကျခှာသှားတတျကွပါတယျ။
Relationship တဈခုမှာ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျက ပွိုငျဖကျတှလေို သဘောထားဆကျဆံနရေငျတော့ ရရှေညျတညျမွဲမှုရှိမှာမဟုတျပါဘူး။ ယောကျြားလေးတှေ အမြားစုဟာ ကိုယျ့ခဈြတဲ့သူက ကိုယျ့အပျေါ အားကိုးတာမြိုးကို လိုခငျြကွပါတယျ။ ကိစ်စတိုငျးမှာ သူ့ရှကေ့ တံတိုငျးတဈခုလို အကာကှယျပေးခငျြကွပါတယျ။ ဒီလိုမှမဟုတျဘဲ ကိုယျ့ကို ကိုယျ့ခဈြသူက အမွဲလိုလို ထိနျးခြုပျနတေယျ၊ ကိစ်စသေးသေးလေးက အစသူ့လကျသူ့ခွနေဲ့ လိုကျလုပျပေးနတေဲ့အခါ သူ့ဘဝမှာ ကိုယျက အသုံးမကြ တဲ့သူ၊ အရေးမပါတဲ့သူလို့ ထငျခံလာရပွီး သူ့နဲ့ပတျသတျရငျ ပွိုငျဘကျတဈယောကျလို ထငျမွငျလာတတျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အမြိုးသမီးတဈယောကျက သူ့နယျပယျ၊ သူ့ပတျဝနျးကငျြမှာ ဘယျလောကျပဲ သိနေ၊ တတျနပေါစေ အိမျရောကျရငျတော့ မတတျခငျြယောငျဆောငျပွီး ကိုယျ့အမြိုးသားကို ရှတေ့နျးတငျပွီး ဦးဆောငျခိုငျးရတဲ့ အခိုကျအတနျ့တှရှေိပါတယျ။
တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ အရမျးခဈြကွတဲ့အခါ သဝနျတိုတယျ၊ ကိုယျ့ကို ထားသှားမှာကွောကျတယျ၊ ကိုယျနဲ့ပတျသတျပွီး ဘာတဈခုမှ အမှားအယှငျးမခံနိုငျဘူး စတဲ့ စိတျခံစားမှုတှကေ တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ဖိအားပေးသလိုဖွဈလာပါတယျ။ တဈယောကျကို တဈယောကျ အဆုံးရှုံးမခံနိုငျတာကနေ မယုံကွညျတဲ့ အဆငျ့ကို ကူးပွောငျးသှားပါတယျ။ သူ့ကို လကျလှတျဆုံးရှုံးမခံနိုငျတဲ့အခါ သူငါ့ကှယျရာမှာ ဘာလုပျမလဲ၊ လိုငျးပျေါမှာ ငါ့အပွငျ ဘယျသူနဲ့ စကားပွောနမေလဲ စတဲ့ စိုးရိမျးစိတျတှေ ကွောငျ့ ကိုယျ့ခဈြသူကို အမွဲလိုလိုစောငျ့ကွညျ့ရကနေ အမှားအယှငျးလေး နညျးနညျးရှိလာတဲ့အခါ မယုံကွညျတဲ့ သံသယတှကေ ဝငျလာခဲ့ပါတယျ။ ဒီလို အပွုအမူတှေ မြားလာတဲ့အခါ တဈဖကျသူကလညျး အနကေဉျြးလာပွီး ကိုယျ့ကိုကိုယျယုံကွညျမှု လြော့နညျးလာသလို ခံစားရပါတယျ။ ဒီလိုအပွုအမူတှမြေားလာတဲ့အခါ လကျညိုးထိုးပွစရာ အပွဈကွီးကွီးမားမားမရှိပမေဲ့ ကိုယျ့အနားက အကွောငျးမရှိ ထှကျခှာတတျကွပါတယျ။
သငျ့ရဲ့ခဈြသူဟာ သငျ့အတှကျအခဈြစဈဖွဈကွောငျး ဖျောပွနတေဲ့ အခကျြ (၅)
ကိုယ်က ပေးဆပ်ပြီး ချစ်နေပေမဲ့ သူ့ဘက်က လမ်းခွဲသွားတဲ့ အကြောင်းအရင်း ၃ချက်
ကိုယ့်ဘက်က အကောင်းဆုံးပေးဆပ်ပြီး ချစ်ခဲ့ပေမဲ့ တစ်ခါတလေမှာ ကိုယ့်ကို ထားပြီးလမ်းခွဲသွားတတ်ကြပါတယ်။ နှစ်ဦးသားကြားထဲမှာ ခိုင်ခိုင်မာမာ ချပြလို့ရတဲ့ ပြဿနာကြီးကြီးမားမားလဲ မရှိဘဲဘာကြောင့် လမ်းခွဲသွားရတာလဲ?
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရှေ့ရိုးအစဉ်အလာအရ အိမ်ထောင်ကျတဲ့အခါမှာ ယောက်ျားလေးတွေက ဦးစီးဦးဆောင်ပြုရတဲ့ အိမ်ထောင်ဦးစီဆိုတဲ့ နေရာကို သတ်မှတ်ပေးထားကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုခေတ်နှောင်းပိုင်းမှာတော့အမျိုးသားတင်မက အမျိုးသမီးတွေကလည်း ယောက်ျားလေးတွေနဲ့အပြိုင် ရင်ဘောင်တန်းပြီး ဘဝကို ကြုံသလိုဖြေရှင်းနေကြရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီအပြုအမူဟာ ကိုယ်တွေချစ်သူနှစ်ဦးကြားမှာရှိတဲ့ ဆက်ဆံရေးကို ပျက်ပြားစေပါတယ်။ ယောက်ျားလေးတွေ အများစုဟာ တစ်ချိန်မှာ ကိုယ်က ဦးစီးဦးဆောင်ပြုရမဲ့ အိမ်ထောင်ဦးစီး ဖြစ်လာမယ်လို့ ခံယူထားတဲ့အတွက် ကိုယ်ချစ်သူကိုလည်း ကိုယ့်ရဲ့ ဦးဆောင်မှုနောက်က လိုက်စေချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူကို အရမ်းချစ်မိတဲ့အခါ သူ့အတွက် ဘာမှလိုလေစိတ်မရှိ ရှေ့ကနေဦးဆောင်ပြီး ဖြည့်ဆည်းပေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် အစစအရာရာ ကိုယ်ကပဲ ဦးဆောင်ပေးခြင်းတာမျိုးရှိလာတဲ့အခါ အမျိုးသားတွေအမြင်မှာ ကိုယ့်အပေါ် လေးစားမှုမရှိဘူး၊ အရာရာသူ့လက် သူခြေချည်းပဲ မိန်းကလေး ဦးဆောင်မှုနောက်က လိုက်နေရတယ်ဆိုတဲ့ အတွေးစိတ်က ဝင်လာပြီး ကိုယ့်အနားက ထွက်ခွာသွားတတ်ကြပါတယ်။
Relationship တစ်ခုမှာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်က ပြိုင်ဖက်တွေလို သဘောထားဆက်ဆံနေရင်တော့ ရေရှည်တည်မြဲမှုရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ယောက်ျားလေးတွေ အများစုဟာ ကိုယ့်ချစ်တဲ့သူက ကိုယ့်အပေါ် အားကိုးတာမျိုးကို လိုချင်ကြပါတယ်။ ကိစ္စတိုင်းမှာ သူ့ရှေ့က တံတိုင်းတစ်ခုလို အကာကွယ်ပေးချင်ကြပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ကို ကိုယ့်ချစ်သူက အမြဲလိုလို ထိန်းချုပ်နေတယ်၊ ကိစ္စသေးသေးလေးက အစသူ့လက်သူ့ခြေနဲ့ လိုက်လုပ်ပေးနေတဲ့အခါ သူ့ဘဝမှာ ကိုယ်က အသုံးမကျ တဲ့သူ၊ အရေးမပါတဲ့သူလို့ ထင်ခံလာရပြီး သူ့နဲ့ပတ်သတ်ရင် ပြိုင်ဘက်တစ်ယောက်လို ထင်မြင်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က သူ့နယ်ပယ်၊ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘယ်လောက်ပဲ သိနေ၊ တတ်နေပါစေ အိမ်ရောက်ရင်တော့
မတတ်ချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ကိုယ့်အမျိုးသားကို ရှေ့တန်းတင်ပြီး ဦးဆောင်ခိုင်းရတဲ့ အခိုက်အတန့်တွေရှိပါတယ်။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အရမ်းချစ်ကြတဲ့အခါ သဝန်တိုတယ်၊ ကိုယ့်ကို ထားသွားမှာကြောက်တယ်၊ ကိုယ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဘာတစ်ခုမှ အမှားအယွင်းမခံနိုင်ဘူး စတဲ့ စိတ်ခံစားမှုတွေက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဖိအားပေးသလိုဖြစ်လာပါတယ်။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အဆုံးရှုံးမခံနိုင်တာကနေ မယုံကြည်တဲ့ အဆင့်ကို ကူးပြောင်းသွားပါတယ်။ သူ့ကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးမခံနိုင်တဲ့အခါ သူငါ့ကွယ်ရာမှာ ဘာလုပ်မလဲ၊ လိုင်းပေါ်မှာ ငါ့အပြင် ဘယ်သူနဲ့ စကားပြောနေမလဲ စတဲ့ စိုးရိမ်းစိတ်တွေ ကြောင့် ကိုယ့်ချစ်သူကို အမြဲလိုလိုစောင့်ကြည့်ရကနေ အမှားအယွင်းလေး နည်းနည်းရှိလာတဲ့အခါ မယုံကြည်တဲ့ သံသယတွေက ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို အပြုအမူတွေ များလာတဲ့အခါ တစ်ဖက်သူကလည်း အနေကျဉ်းလာပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံကြည်မှု လျော့နည်းလာသလို ခံစားရပါတယ်။ ဒီလိုအပြုအမူတွေများလာတဲ့အခါ လက်ညိုးထိုးပြစရာ အပြစ်ကြီးကြီးမားမားမရှိပေမဲ့ ကိုယ့်အနားက အကြောင်းမရှိ ထွက်ခွာတတ်ကြပါတယ်။